Politika momba ny tsiambaratelo momba ny tranonkala »Hodges University Admissions
Misaotra anao nitsidika ny tranokalan'i Hodges. Ny Anjerimanontolon'i Hodges dia manaraka ny lalàna sy fitsipika rehetra araky ny lalàna Florida, ny lalàna federaly amerikana, ary ny General Data Protection Regulation (GDPR). Hodges University dia hita an-tserasera amin'ny www.hodges.edu. Manana toeran'ny campus ihany koa izahay any Fort Myers: 4501 Colonial Blvd., Fort Myers, FL 33966.
Manangona angon-drakitra an-tsitrapo omena anay momba ireo mpitsidika tranokalanay izahay amin'ny alàlan'ny famoronana kaonty, fampiharana ary endrika fifandraisana izay natolotra tamin'ny alàlan'ity tranonkala ity.
Ho fanampin'izany, mampiasa angon-drakitra fanarahana tranokala izahay mba hanomezana ny traikefan'ny mpampiasa tsara indrindra. Mampiasa cookies amin'ny tranokalanay ihany koa izahay hiresahana sy hanamboarana fampahalalana mifototra amin'ny làlan'ny fidirana mankany amin'ny tranokala. Ity tranokala ity koa dia manangona ny mombamomba ny fifamoivoizana sy ny mpitsidika toa ny sehatra internet sy ny adiresy Internet an'ny solosaina ampiasainao amin'ny alàlan'ny fampiasana ireo fitaovana fanaovana an-tranonkala mahazatra sy ireo fitaovana fanarahan-dia. Ny fampahalalana nangonina dia ho an'ny fampiasana anatiny fotsiny hanohanana ny fisoratana anarana ho an'ny mpianatra, hamaliana ireo fangatahana mpitsidika tranokala ary ny fanadihadiana an-tranonkala.
Ny rohy mankamin'ny loharano Internet ivelany, ao anatin'izany ny tranokala, dia omena ho fampahalalana fotsiny; izy ireo dia tsy fanamafisana na fankatoavana avy amin'ny Hodges University amin'ny iray amin'ireo vokatra, serivisy, na hevitry ny orinasa, fikambanana na olona tsirairay. Ny oniversite Hodges dia tsy tompon'andraikitra amin'ny fahamendrehana, ny ara-dalàna na ny atin'ny tranokala ivelany na ny an'ny rohy manaraka. Mifandraisa amin'ny tranokala ivelany raha te hahalala ny valin'ny fanontaniana momba ny atiny.
Amin'ny ankapobeny, ny tranonkalan'i Hodges dia natao hampiasan'ny olon-dehibe, raha tsy hoe misy marika manokana ho an'ny ankizy. Hodges dia tsy manangona fahalalana mombamomba ireo ankizy latsaky ny 13 taona. Raha fantatsika fa nanangona ny mombamomba ny zaza latsaky ny 13 taona isika izay tsy natolotra an-tsitrapo anay, dia hofafanay avy ao amin'ny rafitray izany.
Raha olona ao anatin'ny EU ianao ary mifandray amin'i Hodges ao anatin'ity fampandrenesana ity dia manome ireto zony manaraka ireto ny GDPR. Raha te hampiasa ny iray amin'ireo zony ireo dia mifandraisa amin'ny tompon'andraikitra momba ny fiarovana ny angona ao amin'ny Gloria Wrenn, jobs@hodges.edu..